कोरोना खोप लगाएकालाई किन आउँछ ज्वरो? – Health Post Nepal
कोरोना खोप लगाएकालाई किन आउँछ ज्वरो?
२०७७ माघ १९ गते १२:३०
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप लगाउन थालिएको पाँच दिन भइसकेको छ।
खोप लगाएका कतिपय मानिसमा ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको पाइएको छ।
तर, खोप लगाएपछि समान्य लक्षण देखिने हुँदा नआतिन विज्ञहरूको सुझाव छ।
कतिपय मानिसमा अझै पनि खोप लगाउँदा केही समस्या देखिनेहोकी भन्ने त्रास रहेको पाइन्छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका डा. अनुप बाँस्तोला भने खोप लगाएपछि लक्षण देखिनु स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउँछन्। उनी खोप लगाउने सामान्य असर देखिने भएकाले कसैलाई नआत्तिन सुझाव दिन्छन्।
खोप लगाएपछि समान्यता १५ देखि २० प्रतिशत मानिसमा मुख्यतया ज्वरो देखिनसक्छ।
खोप लगाएपछि किन ज्वरो देखिन्छ?
खोपमा कोभिड १९ भाइरसको भाइरल प्रोटिन (सानो टुक्रा) शरीर भित्र छिराउने गरिन्छ।
यो अति सूक्ष्म हुन्छ। यसले कोरोना भाइरसको प्रोटिनलाई सुरक्षितरुपमा सिरिन्जको माध्यमबाट मानिसको शरीरमा रहेको सेलभित्र पु-याउन मद्दत गर्ने भाइरोलोजिष्ट डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन्।
‘खोप लगाएपछि सेलभित्र लिपिडको घेराबन्दी तोडेर भाइरसको टुक्रा सेलको साइटोप्लाज्मामा देखापर्छ,’ डा. पाण्डेले भने , ‘यसपछि मानव शरीरभित्रको इम्युन सिस्टममा फैलिन्छ र शरीरभित्र घुलमिल हुने क्रममा शरीरभित्रका तत्वहरू सक्रिय हुँदा कुनै व्यक्तिमा ज्वरो आउने र शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ।’
त्यसैगरी, शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले एन्टिजेनसँग रेस्पोन्स गरेको खण्डमा ज्वरो आउने डा. बाँस्तोला बताउँछन्।
‘कुनै व्यक्तिमा खोप लगाएसकेपछि अन्य ब्याक्टेरिया शरीरमा छिरेको अवस्थामा पनि ज्वरो आउँछ,’ डा. बाँस्तोला भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिमा खोप लगाएपछि ज्वरो ल्याउने तत्व हुन्छ। त्यसका कारणले पनि समान्य समस्या देखिन सक्छ।’
टेकु अस्पतालकमा अनुसार पहिलो दिन खोप लगाएका २९ स्वास्थ्यकर्मी मध्ये २३ जनामा कुनै न कुनै लक्षण देखिएको थियो।
केहीलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, चिलाउने, खोप लगाएको ठाउँमा रातो हुने र बान्ता हुनेलगायत लक्षण देखिएका थियो।
उनले खोप लगाएका ६ जनामा एउटा मात्र लक्षण, ६ जनामा दुई, तीनजनामा तीन, एकजनामा चार, दुईजनामा पाँच, चारजनामा ६ र एकजनामा आठ वटासम्म लक्षण देखिएको बताए। खोप लगाएका आइसियु वार्ड, इमर्जेन्सीमा काम गर्ने २९ जनासँगको सोध्दा यो तथ्य पाइएको डा. बाँस्तोलाले जनाएका छन्।
तर, यस्ता लक्षण कुनै उपचारबिना र सामान्य औषधिको प्रयोगले नै ठिक भएको उनी बताउँछन्।
One thought on “कोरोना खोप लगाएकालाई किन आउँछ ज्वरो?”
Ritu raj shah says:
I am still not vaccinated.
No information regarding vaccination and no nearby centre.
I am residing currently at garuda-4,rautahat,province-2,working at Roma hospital as medical officer